Inhloko-dolobha ye-Yemen, Sana'a: umlando kanye ezikhangayo yedolobha
Inhloko-dolobha ye-Yemen - Sana'a. Ubelokhu eyaziwa kusukela ekhulwini lokuqala. NgeNkathi Ephakathi phakathi komuzi babe imizila yezohwebo kusukela eningizimu Arabia emazweni Mediterranean. Kusukela VII ukuze IX ekhulwini kwaba yokuhlala nabanye abaholi Arab, bese iba inhloko-dolobha ye-Yafuridov isimo. Ngokulandelayo, kusukela XI ekhulwini xv, inhlokodolobha samanje Yemen ukuthi yanjalo obuswa emazweni ahlukahlukene Arabian. Khona-ke ukuze 1628 umuzi wawuyigolide ingxenye yoMbuso WaseTurkey, futhi kamuva elaba yindlunkulu Ngini imams. Ngo-1918 waba inhloko-dolobha yakwa-Sanaa umbuso Yemeni, futhi kusukela ngo-1962 - isimo Yemen Arab Republic.
Yemen ingenye amazwe omncane kunabo bonke e-Middle East. Zanamuhla ifomu isimo kwamiswa ngo-1990 ngemva kokuhlangana aseNingizimu naseNyakatho Yemen. Ngaphambi kwalokho, emazweni amabili ayehluka olunegazi izibhelu yasekhaya njengoba kokubulawa uMongameli futhi amasu okugumbuqela imibuso, kanye nangesikhathi asempini nomunye. Lokhu ibhakuzelisa ukuphila kwawo ngokuqondene nezombusazwe akazange ukuya yinzuzo yelizwe. Inhlokodolobha kwezomnotho Yemen - Aden. Ngaphambili, yena waba umuzi omkhulu uthi Southern.
Kuyaphawuleka ukuthi njengoba Ephakathi inhloko-dolobha Yemen, ukubukeka kwayo ayikashintshi kakhulu. Lo muzi ubizwa kufakwe ohlwini izikhumbuzo empucukweni yomhlaba. E Sanaa Kukhona amathempeli 50 lobehlukene, okuyiwona ezinsukwini ubudala yayibizwa ngokuthi "umuzi kwemibhoshongo we isethi." Enhloko-dolobha, izinsalela esigodlweni Gumdun walondoloza, okuyinto kubhekwa omdala isakhiwo eliphezulu liphumele. Lalinama 20 izibuya.
Inhlokodolobha samanje Yemen esetshenziswa ukuba umuzi omkhulu Northern uthi. Okuthakazelisayo kakhulu lapha ziphawuleka: zokugeza ephakathi, al-Jami mosque al-kebir (kuphela, ngaphandle Mecca, esifuze Muslim - itshe engcwele), enqabeni, caravanserai nezindlu nezingadi kakhulu. Kukhona futhi eminyuziyamu: nyuvesi ubudala (eyaziwa kusukela ekhulwini I), a kazwelonke, ezempi, yobuciko neyezandla. indawo Very interesting iyona Great Mosque ka VII ngekhulu, esemgwaqweni ku Old Town.
Market Es Bitches - kungcono yezindawo esikarisako, okuyinto idume enhlokodolobha. Yemen, ngokuvamile, isimo ayiyinhle, ngakho ukuhweba kuyinto kuqala for replenishment isabelomali. Emakethe athengisa zegolide nezesiliva yayilukiwe Indwangu izindikimba, ubucwebe, ezihlotshiswe kahle futhi obunamaparele nge izinsimbi eziyigugu, tinhlobo letehlukene imimese. Es-suk kusukela ezikhathini zasendulo ezaziwa ngemikhiqizo yalo, ikakhulukazi izinongo kanye ikhofi. Le makethe isindala ngakho futhi yokuqala, kubonakala sengathi lapha isikhathi sisesenjalo. Esikhathini esidlule, isimo badabula umzila nendlwana lecinisekisa inhlalakahle yayo.
Inhloko-dolobha ye-Yemen Itholakala maphakathi nezwe ngezihlahla futhi lisendaweni. Abantu bakhona babe ingxenye yesigidi izakhamuzi. Lo muzi sezentengiselwano, kwamasiko, izimboni kanye nezokuphatha isimo. Ukukhiqizwa amaningi izikhali, amatshe kanye izindwangu, kanye ukukhiqizwa wezandla zethusi, izinto zesiliva nezinto zegolide. Umuzi ine sezindiza zamazwe ngamazwe. Inhloko-dolobha ye-Yemen ixhunywe emgwaqeni port enkulu Hodeida. Ngokuhamba yendawo Rial, kanye aseMelika. Thatha lapha nemali European, kodwa mancane amathuba.
Indlela ukupheka nge amakhowe zhuleny
Nquma ubunjalo wesandla somuntu? Easy!
Italy: Pisa nezinto zalo ezikhangayo